मानव जीवनको इतिहास – Sajha Pati
मानव जीवनको इतिहास
-आशिष गौतम, जीवनको अर्थ भनेको संचार, समझ र सेवा मार्फत मानवीय फस्टाउनको लागि हो । जीवन अस्तित्वको पक्ष हो प्रक्रियांकन, र विकास मार्फत विकसित हुन्छ । जीवन र गैर — जीवन (वा निर्जीव चीजहरु) बीचको महत्वपूर्ण भिन्नता भनेको जीवनले शारीरिक र सचेत विकासको लागि ऊर्जा प्रयोग गर्दछ । जीवन भनेको त्यस्तो चीज हो जुन बढ्दछ र अन्तमा मर्दछ, अर्थात, विस्तार र संज्ञानात्मक हुन बन्द हुन्छ ।
पृथ्वको उमेर लगभग ४.५४ अरब वर्ष हो, पृथ्वीमा जीवनको सब भन्दा पहिलो अविवादित प्रमाण कम्तिमा ३.५ अरब वर्ष पहिलेको हो, र सम्भवत इओर्चियन युग (३.६ देखि ४.० अरब वर्ष पहिले) का पग्लिएको हडियन इओनपछि भूगर्भीय क्रस्टको सुट्टढीकरण भएपछि शुरु भयो । पृथ्वीमा सब भन्दा पुरानो जीवन रुपहरु हावाणु प्रदूषण सूक्ष्मजीवहरु हुन्, जुन हाइड्रथर्मल व्हेन्ट प्रिसिपेट्समा पाइन्छ, जुन साढे ४.२८ अरब वर्ष अघिसम्म बाँचेको हुन सक्छ, सागरहरु ४.४१ अरब वर्ष पहिले गठन भएको केही समयपछि नै ।
मानव, एक संस्कृति बोक्ने प्राइमेट होमोस विशेष गरी ज् सेपियन्स प्रजातिमा वर्गीकृत गरिएको छ । मानव शरीर रचनात्मक समान र महान वानर सम्बन्धित छ तर एक अधिक उच्च विकसित मस्तिष्क र स्पष्ट बोली र अमूर्त तर्क को लागी एक परिणामा क्षमता द्वारा छुट्याइएको छ ।
पहिलो मानव पुर्खाहरु पाँच लाख र सात लाख वर्ष पहिले देखा परेका थिए जब सम्भवत, अफ्रिकामा केही ९बउभष्पिभ० जीवहरु दुई खुट्टाहरुमा हिड्न थाले । उनीहरुले २.५ लाख वर्ष पहिले कच्चा ढुङ्गाका उपकरणकरु फल्याकिंग गर्दै थिए । त्यस मध्ये केही आफ्रिकाबाट एशिया र युरोपमा २० लाख वर्ष अघि फैलिए । मानवहरु सबैभन्दा पहिला अफ्रिकामा विकसित भयो र धेरैजसो मानव विकास त्यो महाद्वीपमा भयो । छ र दुई लाख वर्ष को बीचमा पहिले बस्ने आरम्भिक मानवहरुका जीवाश्महरु पूर्ण आफ्रिकाबाट आएका हुन् । अधिकांश वैज्ञानिकहरुले प्रारम्भिक मानवहरुको केहि १५ देखि २० विभिन्न प्रजातिहरुलाई चिन्दछन् । होमोना इरेक्टर अफ्रिका छोडेर जाने पहिलो होमिनिना थिए र यी प्रजातिहरु १.३ देखि १.८ लाख वर्ष अघि अफ्रिका, एसिया र युरोपमा फैलिए । ज् इरेक्टसको एक जनसंख्या, कहिलेकाँही छुट्टै प्रजाति होमो अर्गस्टरको रुपमा पनि वर्गीकृत गरिएको छ, अफ्रियकामा बसे र होमो सेपियनसमा विकसित भयो ।
मानव को विकास
मानव विकास भनेको क्रमविकास प्रक्रिया हो र यसले मानवशास्त्रको आधुनिक मानवहरुको उत्पत्ति भयो, जसको सुरुआत प्राइमेट्रसको विशेष इतिहास होमोसको विकासवादी इतिहासबाट भयो र होमोड सेपियन्सको उत्पत्ति होमोनिड परिवारको एक विशिष्ट प्रजाति, महान वानरको रुपमा भयो ।
मानव विकासको प्रकार
१. होमो ईरेक्टस
२. होमो निएन्डथल
३. होमो हाबिलिस
५. होमो फलोरिएन्सिस
६. होमो सेपियन्स
 होमो भनेको के हो ?
होमो जीनस हो जुन अन्यथा विलुप्त हुने जीनस अस्ट्रेलोपिथेकसमा देखा पर्दछ जुन अस्तित्वमा रहेको प्रजाति होमो सेपियन्स समाहित गर्दछ, यसका साथै विलुप्त केही प्रजातिहरु पुरानोको रुपमा वर्गीकृत गरिएको छ वा आधुनिक मानवसँग निकट सम्बन्धित छ, विशेष रुपमा होमो इरेक्टर र होमो निएन्डरथलेनिसिस ।
१) होमो ईरेक्टस
होमो इरेक्टस वा सोझो मान्छे, मानवको विलुप्त प्रजाति हो जुन मानव विकासवादी वशं भित्र एउटा पेचिंंग स्थान राख्छ । पहिलो अवशेष करिब १.९ लाख वर्ष पहिले देखा प¥यो र मध्य एभिष्कतयअभलभ मा जीवित रहेका भर्खरका असाधाण ठूलो समयको फ्रेम विस्तार गरे । होमो इरेक्टस पहिलो मानव पूर्वज थिए जुन पुरानो संसारभरि फैलिएको थियो, युरेशियामा इबेरियन प्रयाद्वीपदेखि जावासम्म फैलिएको थियो ।होमो इरेक्टसको अफ्रिकी जनसंख्या धेरै मानव प्रजातिहरु जस्तै एच हिडेलबर्गेनिसिस र एचमा प्रत्यक्ष पुर्खा हुन् सक्छ । होमो इरेक्टस होमोको सबैभन्दा लामो आयु बस्ने प्रजाति हो, जुन एक लाख वर्ष भन्दा बढी बँचेको छ । वयस्कहरु १.४ — १.८ मिटर अग्लो र ४१ — ६५ किलोग्राम तौलमा पुगे । एच इरेक्ट मस्तिष्कको आकार आज मानव भन्दा सानो थियो । तिनीहरुको उपकारण किटमा हेलिकप्टरहरु ९ऋजयउउभचक०,क्लीभरहरु र हथौडोंका साथै छुरा र स्क््रयापरको रुपमा प्रयोग गरिएको फलेक्स समावेश थिए । मनोवृत्ति सयौं हजारैं वर्ष पहिले मात्र अस्तित्वमा थिएन, तर यो पनि एक प्राचीन मानव पूर्वज पतन हुन सक्छ । होमो पहिले देखा प¥यो र झन्डै ५०,००० देखि १००,००० वर्ष अघि लोप भयो ।
२) होमो निएन्डथल
निएन्डरथल्स एक विलुप्त प्रजाति वा पुरातन मनावको उप — प्रजाति हो जुन लगभग ४०,००० वर्ष अघि यूरेशियामा बस्थे । तिनीहरु सम्भव भएको प्रतिस्पर्धा वा विनाशको कारण आधुनिक मानिसहरु आप्रवासी गरेर वा ठूलो जलवायु परिवर्तन, रोग, वा यी कारकहरुको संयोजनको कारण विलुप्त हुन सक्छन् । न्यान्डरथल्सको कडा, मांसल शरीरहरु, र फराकिलो हिप्स र काँध थिए । वयस्कहरु १.५ं — १.७५ मिटर अग्लो र ६४—८२ केजी तौलको हुन्थ्यो । प्रारम्भिक न्यान्डरथल्सको औसत न्यान्डरथल्सको तुलनामा औसतमा अग्लो थियो, तर तिनीहरु वजन त्यस्तै थियो । मौसेरियन पोइन्ट न्यान्डरथल्स कुशल उपकरण निर्माता थिए तर आधुनिक मानव जत्तिकै उन्नत थिएन । भाला पोइन्टहरु र चाकुहरु लगायत उनीहरुका उपकरणहरु, सम्भवतः काठको ह्यान्डलहरु, स्क््रयापर्सहरु, नेमेन्डर्ड हार्पोनहरु, र कुँदिएका उपकरणहरुमा सेट हुन्छन् । वैज्ञानिकहरु व्यापक रुपमा सहमत छन् कि लगभग २०,००० वर्ष अगाडि अफ्रिका बाहिर आधुनिक मानवहरुको लहर पछि निएन्डरथल्सहरु ४०,००० वर्ष अघि मरे ।
३) होमो हाबिलिस
होमो हाबिलिस ढुङ्गा युग मानवको पुरातन प्रजाति हो जुन शुरुमा प्लाइस्टोसीनको समयमा करीव २.१ र १.५ मिलियन वर्ष अघि ९ःथब० बीच बाँचिरहेको थियो । प्रजाति पहिलो चोटि १९५५ मा तान्जानियाको ओल्डुवाई गोर्जेमा नृव विज्ञानी मेरी र लुइस लिकीले ओल्डोवान स्टोन टूल उद्योगसँग सम्बन्धित पत्ता लगाएका थिए । होमो हाबिलिस केवल औसत ४ फिट ३ इन्च अग्लो थियो, जुन औसत मानव उचाई भन्दा धैरै छोटो छ । हाबिलिससँग गोप्य हतियार थियो ढुङ्गा औजारहरु ।जवकी हाबिसल एक सर्वशक्तिमान थियो, दयष्कभष् एक कडा — देखि— च्यू शाकाहारी आहारमा बाँचे । यसको प्राराम्भिक उपकरण नवाचार र कम विशेष आहारको कारणले गर्दा नयाँ प्रजातिहरुको पुरै रेखाको पूर्ववर्ती भयो, जवकि प्यारान्थ्रोपस बोइसे जीवाश्म रेकर्डबाट गायब भए । हामो हेबिलिस अफ्रिकामा ५००,००० वर्षको अवधिको लागि हामो इरेक्टरसको साथ मिलेको हुन सक्छ ।
डेनिसोभन्स वा डेनिसोवा होमिनिन विलुप्त प्रजाति वा पुरातन मानवको उप — प्रजाति हो जुन एसियाभरि तल्लो र मध्य पालिओलिथिक कालमा (सम्भाव्य रुपमा नयाँ गिनियामा ३०,००० — १४,५०० वर्ष अगाडि जीवित रहेको) । साईबेरियाको डेनिसोवा गुफामा उत्खनन गर्दा झन्डै ८०,००० ढुङ्गाका वस्तुहरु भेट्टाइयो जसले विलुप्त पार्ने मानवहरुले १५०,००० वर्षको अवधिमा छोडिदिए । कोलिन ब्यारा ९ऋयष्लि द्यबचचबक० अनुसार “सामूहिक रुपमा तिनीहरुले डेनिसोभान्सले विकसित गरेको टेक्नोलोजी भएको देखाउँछन् जस्तो देखिन्छ, लगभग ५०,००० वर्ष पहिले शानदार ब्रेसलेट मोती र टियाराको उत्पादनको साथ । डेनिसोवा गुफा अल्ताई पर्वतको बीचमा रहेको खोलामा अवस्थित छ, जनु कजाखस्तान, मंगोलिया र चीनको रुसी सीमाबाट केही सय किलोमिटर टाढा छ ।” आधुनिक डीएनएले देखाउँदछ कि डेनिसोभनहरुले आश्चर्यनक रुपले करीव ४०,००० वर्ष पहिले हराएका निएन्डरथल्सलाई पनि रोकेका थिए ।
५) होमो फलोरिएन्सिस
होमो फलोरिएन्सिस पुरातन मानवको साना प्रजाति हो जसले करीव ५०,००० वर्ष अघि आधुनिक मानवहरुको आगमन नभएसम्म इन्डोनेसियाको फलोरस टापुमा बसोबसा गथ्र्यो । करीव १.१ मिटर उचाई भएको व्यक्तिको बाँकी अवशेष २००३ मा इन्डोनेसियाको फलोरेस टापुको लियांग बुआमा भेटिए । १०६ अm उचाईको बावजुद, ीद्यज्ञ को वजन ३२.५ केजी को नजिक भएको अनुमान छ र होमो फलोरसिएनिससको कार्पल हड्डीहरु (मनडढीका हड्डीहरु) आधुनिक मानवहरुको भन्दा चिम्पान्जीजस्तो देखिन्छ । आधुनिक मानवहरु ५०,००० वर्ष पहिले यस समयदेखि एच फलोरिसेंसिस विलुप्त भएको मानिन्छ ।
६) होमो सेपियन्स
होमो सेपियन्स मात्र अस्तित्वमा रहेका मानव प्रजातिहरु हुन् । नाम ’ज्ञानी मानिस’ को लागि ल्याटिन हो र १७५८ मा कर्ल लिनेयसद्वारा प्रस्तुत गरिएको थियो । होमोस जातका विलुप्त प्रजातिहरुमा होमो इरेक्टस, करीव १.९ देखि ०.४ मिलियन वर्ष अघि अस्तित्वमा रहेको र अन्य अन्य प्रजातिहरु पनि पर्छन । हालसम्म, आधुनिक होमो सेपियन्स कंकालको सब भन्दा पुराना खोजहरु अफ्रिकाबाट आएका छन् । तिनीहरु महाद्वीप मा लगभग २००,००० वर्ष पहिले को मिति । तिनीहरु लगभग १००,००० वर्ष अगाडि दक्षिणपरिश्चम एशियामा देखा पर्दछन् र ६०,००० — ४०,००० वर्ष अगाडि परानो विश्वको अन्य ठाँउमा । आनुवंशिक र जीवाश्म प्रमाणका अनुसार होमे सेपियन्सको पुरानो संस्करण अफ्रिकामा मात्र २००,००० देखि १००,००० वर्षा अघि विकासित भएको थियो र एक शाखाका सदस्यहरुले ९०,००० वर्ष अगाडि आफ्रिका छाडेका थिए र समय बित्दै जाँदा निएन्डरथल्स र होमो इरेक्टस जस्ता जस्ता पहिलेका जनसंख्यालाई प्रतिस्थापित गरे ।
जबकि हाम्रा पुर्खाहरु करीव ६ लाख वर्ष को लागी गरीरहेको छन्, तर मानव को अध्निक रुप को लगभग २,००,००० वर्ष पहिले मात्र विकसित भएको छ । सभ्यता हामीलाई थाहा छ कि यो लगभग ६,००० वर्ष पुरानो हो, र औद्योगीकरण १८०० को दशकमा मात्र उत्कटतासाथ शुरु भयो ।
बिदेशबाट आएर काठमाडौं महानगर क्षेत्रमा बसेका सबै १,०१६ को ¥यापिड डाइग्नोष्टिक परीक्षण सम्पन्न, सबै नतिजा नेगेटिभ